कलियुगका कुरा: 'अतिथि' भनेर बोलाएर 'अथिती' बनाइदियो भने
Kb Rana, Ojha Pitambar and 69 others like this.
Narayan Poudel प्रेस चैातारीले नराम्रोसँग प्रेस गरेछ नि :(
Biplav Acharya I must share this.... ;)
यहाँ "अतिथि"लाई अ-थिती बनाईदिएका रहेछन्। पत्रकारहरुकै मुखबाट कतिपय स्थानका कार्यक्रमहरुमा कार्यक्रम अध्यक्षलाई "अ-दक्ष" भनेर सम्बोधन गरी अप्ठ्यारोमा पारिदिएका भनी सुनेको छु, बेला-बेलामा।
Tuesday at 11:31am ·
ShAilen AdhikAri ·4mutual friends
patrakar le desh khaye hau deepak ji, k garne hola..
ईशान ईशान · Friends with Ekal Silwal and 67 others
नेपालीमा 'भाषामा बलात्कार' गर्न मिल्दैन हजूर । 'भाषामाथि बलात्कार' पो हुँनुपर्ने होईन हजूर? मँ, हजूर, बाटोमा हिँड्ने रामबहादुर - हामी सबै बलात्कारी हौं ।
Tuesday at 11:33am ·
अराजक आइडिया · Friends with Sunil Dahal and 8 others
फेस्बुकां लेखेर मनोरन्जन गर्न पर्नी करीम लेर आएसी यस्तै तांइ न तुंइका कुरा गर्नै परो!
Tuesday at 11:39am ·
Bhumraj Tiwari hhhha
Sunita Giri भाषामा बलात्कार गर्ने चाहिँ फेरि पत्रकारकै स‌ंस्थारहेछ - प्रेस चौतारी। they are the one who spoil every thing than to make everything.
Prem Sherbuja · 10 mutual friends
हिजो मात्र एक अग्रज विद्धवानले "मेडियाले नेपालि भाषा बिगारेको चाँही पक्कै हो" भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो रहेछ । तपाईंले त प्रमाण नै पेश गरिदिनु भयो!
Neupane Manoj jaya ho patrakar ju ko ........
Tuesday at 4:37pm ·
Dipesh Shahi · 13 mutual friends
merai jilla ko beijjat
Tuesday at 10:42pm ·
Bhumiraj Rai ‎-HAHAHAHA, SATIK TIPPANI......
Tuesday at 11:45pm ·
Kulung Rai sir... KHAANE FUL n LAGAUNRE FUL eutai lekhna thalepa6i... yati garna k gahro bho ra....